Usuku Lwamazwe Ngamazwe Amasiko, njengoba yaziwa, lugujwa emhlabeni wonke 26 Januwari. Kufanele kuqashelwe ukuthi Rus lasendulo 'kwakukhona uhlobo amasiko. Ngalezo zinsuku, lokukhokhisa imali ngoba ethenga isikebhe izimpahla ngaphesheya komngcele, ukusetshenziswa isikhala, ukuqasha ngisho isikhala okudayisa kwencani, kanye uhlobo ukuvikelwa, okuyinto kwenziwa ngabathengisi noma abanye abantu zasebukhosini.
Usuku Customs. indaba
Ukuhweba izimali kuvame icala amalungu retinue kwesikhulu, ngubani ngenye babizwa ngokuthi "Mytnik". Yiqiniso, e Rus lasendulo zonke imisebenzi namasiko zazihlukaniswe ezinqumela ku eya ezinhlangothini futhi ukuhweba. Ngaphezu kwalokho, i-Ukunqamula izimpahla ngokusebenzisa emngceleni yangaphakathi noma yangaphandle uzophinde ukhokhiswe strangles. Ngokwesibonelo, strangles "ezomile" senzelwe owela emhlabeni, futhi "amanzi", ngakho-ke, ngoba ukulandisa kuphetha yamanzi.
Ngo-1868 idaliwe okubizwa ngokuthi cruise Sea. Inhloso Its main ukuqinisa umngcele ezincikene nolwandle ezizungeze oLwandle iBaltic. Kamuva, ngo-1872, le ndawo efanayo yasungulwa by the okuthiwa Customs imikhumbi. Ngo 1893, i-Border Guard iye ezifuywa aphume ngezezimali nentela.
kabusha Okusanda nalehleliwe isakhiwo amasiko sivunyiwe ngo-1912 Tsarist Russia. Ngemva kwemukelwa Isinqumo of Yabantu Commissars, okuyinto amadili ikakhulu ezithinta umbuzo ukufakwa kwezimayini kuhulumeni ngokuphelele zonke namanye amazwe, kwenziwa isinqumo phezu ukusungulwa kwe-Border Guard.
Njengoba izwe lethu, izinguquko ezinkulu kule ndawo waqala zenzeke emva 1991, lapho esemthethweni Customs Ikhodi ye-USSR kwavunyelwana
Usuku Customs eRussia. Umlando nesenzakalo
Kufanele kuqashelwe ukuthi i-Federal Customs Day umkhosi ngokulinganiswa ayemncane, okuyinto lalimisa wamemezela emva kokuwa USSR. UMongameli Boris Yeltsin ngemvume isimemezelo Ukusetha usuku - 25 Okthoba. Ngaphambili, amasiko Day ezweni lethu lugujwa May 29. Manje ihlonipha omakadebona inkonzo amasiko ngalolu suku.
Ngokusho kochwepheshe, isinqumo Yeltsin wayengabuzi ngephutha. Into ukuthi ukude 25 Okthoba 1653 ezweni lethu kwakukhona okubizwa ngokuthi esihlanganisiwe amasiko nemithetho, ukhululeka ngothi Alekseya Romanova.
Ezweni, njengoba iye kuphawuliwe ngenhla, uSuku Customs lugujwa 26 Januwari. Lolu suku lihlotshaniswa ngokuyinhloko ne ukusungulwa umhlangano wokuqala Customs Cooperation Council endaweni Brussels (26 January 1953).
Umhlaba Customs Inhlangano kuthuthukise okwamanje ngaphansi kwakhe umyalo 179 emazweni, okuhlanganisa ezweni lethu. Kuyaphawuleka ukuthi Russian Federation ngokwayo uyilungu zokuhlonipha lenhlangano zamashumi eminyaka athile edlule. Through ukusebenzisana eduze nasemsebenzini ehlelekile kulesi sakhiwo, Russia uye wakwazi ukufeza umphumela ube ukuqina kancane kancane esingenakuqhathaniswa sokubambisana kwamazwe omhlaba kanye nokubambisana nezinhlangano amasiko akwamanye amazwe.
Imincintiswano Fun ingane
Ubuciko cinema emhlabeni futhi nokuqashelwa kwabo njengenhlangano esemthethweni
Ghost imaski - olukhulu fancy ingubo imicimbi